Xeerka dhaqaale wanaagga oo kaliya ma’ahan caqabadaha hortaagan heshiis cusbooneysiinta Barcelona ee Messi, lix caqabadood oo ku hor gudban xallinta mustaqbalka Kabtanka Argentina – Gool FM
Xeerka dhaqaale wanaagga oo kaliya ma’ahan caqabadaha hortaagan heshiis cusbooneysiinta Barcelona ee Messi, lix caqabadood oo ku hor gudban xallinta mustaqbalka Kabtanka Argentina
Ahmed Nur July 3, 2021
(Barcelona) 03 Luulyo 2021. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa wali u taagan xalinta arrimaha qandaraas kordhinta Lionel Messi inkastoo xiddigan heshiiskiisa uu dhacay 30-kii June, balse laacibkan ayaa iska diiday inuu wada xaajood rasmi ah la sameeyo kooxaha doonaya saxiixiisa, sidaas darteed, waxaa muuqato in labada dhinac ay isla meel dhigeen inta badan qodobbada heshiiska cusub.
Si kastaba ha ahaatee, naadiga Barca ayaa wajaheysa caqabado dhowr ah oo uu ugu horreyso xeerka dhaqaale wanaaggsa ee Financial Fair Play, balse waxaa sidoo kale jira shan caqabadood oo ku hor gudban in Blaugrana heshiis cusub ka saxiixato Messi.
1- Xeerka dhaqaale wanaaggsa
Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa taagan halkii ugu sarreysay ee loo ogalaa inay gaarsiiso miisaaniyaddeeda mushaharaadka, iyadoo aanan fasixin xiddigo hore leh isla markaasna boos u banneyn mushaharaadka Messi, suuro gal ma ahan in la dhammeystiro qandaraas cusbooneysiinta Messi.
2- Caddeynta deynta canshuuraha iyo lacagaha uu ku leeyahay kooxda
Leo ayaa doonaya inay kooxdiisa si buuxda u xalliso arrimaha canshuuraha dowladda Spain isla markaasna kooxdu ay bixiso canshuurta lagu leeyahay isaga, dhinaca kale, Kabtanka xulka Argentina ayaa doonaya inay kooxdu siiso lacago hore mushaharaad bixintooda dib loo dhigay.
3- Mushaharaadka uu kooxda ka qaadanayo
Inkastoo ay kooxda Barcelona la tacaaleyso xaalad dhaqaale xumo, haddana Messi ayaa doonaya inuusan dhimmin mushaharkaadkiisa si uu heshiis cusub u saxiixo.
4- Daamad qaad
Marka laga soo tago doodda xisaabta mushaharaadka uu kooxda ka qaadan doono, 34-sano jirkan ayaa sidoo kale doonaya inuusan lumin qayb ka mid ah mushaharkiisa dhaqaale xumo walba oo kooxda soo food saarta sida inuu dunida soo weeraro hirka labaad ee Koofid19.
5- Deynta uu Leo ku leeyahay Barca
Weeraryahanka Argentina kala qayb galaya tartanka Copa America 2021 ayaa tirsanaya lacago gunnooyin ah oo aysan weli Barcelona bixin, waxaana wakiilladiisa iyo dadka ku dhow dhow ay ku qalqaalinayaan inuu marka hore helo lacagaha uu ku leeyahay kooxda reer Spain.
6- Mashruuc ciyaareed
Inkastoo ay Barca la soo saxiixatay Sergio Aguero, Eric Garcia iyo Memphis Depay, haddana Messi ayaa tabaya saxiixyo waaweyn isagoo doonaya inay kooxda u muuqato mid u tartammi karta dhamaan koobabka kala duwan ee xilli ciyaareedyada soo aaddan.
Isku soo duub e, majaladda MARCA oo daabcaday sheekadan ayaa qabta inaysan sahal noqon doonin inay Barcelona heshiis cusub ka saxiixato Lionel Messi iyadoo aanan xallin lixdaan arrimood.
RASMI: Juan Mata oo qandaraas cusub la galay Manchester United... (Immisa sano ayuu sii joogi doonaa Old Trafford?)
Halyeeyada Barcelona iyo Real Madrid oo kulan ciyaareed ku ballansan bishan & Ronaldinho oo hoggaaminaya safka Blaugrana